ProOpinion: Ka mid noqo Ganacsi Ganacsi oo Daraasad Lagu Wado | Martech Zone
ProOpinion: Ku Biir Bulsho Ganacsi Oo Daraasad Lagu Wado
Saturday, April 25, 2015 Axad, Abriil 26, 2015 Douglas Karr
Mid ka mid ah isbeddelada aan ku aragno shabakadda ayaa ah in goobaha talobixinta bilaashka ah iyo freemium ay sii wadaan la halganka tayada ay ka kooban yihiin iyo saxnaanta macluumaadka ay soo saaraan. Marka ay timaado go'aamada suuq geynta, waxaan sii wadeynaa inaan aragno in qaab loo habeeyay uu soo saaro natiijooyinka ugu fiican. Waxay muhiim u tahay la-taliyayaasha ama suuqleyda inay bartaan dhaqanka, ilaha, iyo yoolalka ganacsi kahor intaan la soo jeedin istaraatiijiyad ama madal. Hal cabir kuma wada filna.
ProOpinion waxay bixisaa waxyaabo gaar ah oo cilmi baaris ku shaqeeya, oo aan laga heli karin meelo kale maxaa yeelay ProOpinion waa isha cilmi baarista. Mawduucu waa badan yahay, si fududna loo heli karo, oo ugu muhiimsan, macno leh.
Xubnaha ProOpinion waxay u heellan yihiin horumarka, waxay si buuxda ugu heellan yihiin inay abuuraan hal-abuurnimo, oo waxay ku adkeystaan ​​raacdadooda adduun ganacsi oo wanaagsan. Shirkadaha adduunka oo dhan, jawaab celinta tooska ah ee dadka isticmaalaya wax soo saarkooda iyo adeegyadooda ayaa muhiim u ah markay isku dayayaan inay tartamayaasha ku hayaan muraayadda aragtida dambe. ProOpinion waxay u oggolaaneysaa xubnaha inay saameyn ku yeeshaan alaabada iyo adeegyada mustaqbalka iyagoo la wadaagaya fikradaha sahannada internetka.
ProOpinion waa u xor inuu ku biiro laakiin xubnuhu wax yar ayey kasban karaan iyagoo waliba hagaajinaya goobta suuqa. Qaar ka mid ah abaalmarinnada caanka ah ee la kasbaday waxaa ka mid ah Kaararka hadiyadda ee Amazon.com iyo Kaararka Hadiyadda ee iTunes. Waxaad sidoo kale ugu deeqi kartaa dakhligaaga Ururka Laanqayrta Cas ee Mareykanka. Martiqaadka sahanka waxaa emayl loogu dirayaa xubnaha ama waxay gali karaan koontadooda proopinion.com si ay ugaqaybqaataan sahaminta khadka tooska ah.
Raadintaada cilmi-baarista adiga ku khusaysa halkan ayey ku joogsataa - ku soo biir ProOpinion maanta.
Kani waa wadahadal la kafaala qaaday oo aan ku qoray magaca ProOpinion.
Tags: bulshada ganacsigacilmi baarista ganacsigagoynbulshada cilmi baarista
Waa maxay Qiyaasaha lagu cabiro Wax ku oolnimada Suuq geynta Iyadoo
Liiska 29 Qalabka Suuq-geynta Dijital ah ee Bilaashka ah